2010: Hlunga, Yenza ngezifiso, Lungiselela | Martech Zone
Siminyene yimininingwane evela ezinkundleni zokuxhumana, kusesho nakwibhokisi lethu lokungenayo. Imiqulu iyaqhubeka nokukhuphuka. Anginayo imithetho engaphansi kwengu-100 ebhokisini lami lokungenayo lokuhambisa imiyalezo nezixwayiso kahle. Ikhalenda lami livumelanisa phakathi kweBlackberry yami, iCal, iKhalenda leGoogle ne Ihlathi. ngine I-Google Voice ukuphatha izingcingo zebhizinisi, futhi YouMail ukuphatha izingcingo eziqonde ngqo efonini yami.
UJoe Hall ubhale namuhla ukuthi ukukhathazeka kwangasese nokusetshenziswa kwe- idatha eyenziwe ngezifiso yi-Google ingaholela ekuzibhubhiseni. Ngiyakuthanda okuthunyelwe nguJoe kodwa angivumelani nalokhu ngenhliziyo yonke. Njengoba ngiqhubeka nokusebenzisa iGoogle, ngifuna ukuthi basebenzise yonke idatha yokugcina ukuze banginikeze impendulo ehlelekile ebhekiswe kimi uqobo. Angifuni ukucubungula imiphumela… nginike impendulo engiyidingayo.
I-Twitter isiba yinto engalawuleki… kunezinkampani eziningi kakhulu, osebenza nabo, ochwepheshe kanye nezinsizakalo engifuna ukuzilandela kepha ukusakazwa kolwazi manje sekuyi-firehose. Ngokujabulisayo, Okuphakelayo ngikhombe lokhu njengethuba… ukuze ngikwazi ukusuka kulokhu:
Isibikezelo sami sango-2010 ngukuthi amasudi okukhiqiza lokho lemifanekiso, nokwandisa futhi ukwenza ngokwezifiso kuzoba ukufutheka. Ukwehliswa okuqhubekayo kwezinkampani kuzosunduza umsebenzi owengeziwe kwizinsizakusebenza ezincane. Ukukhiqiza kwethu kuzofanele kukhule, noma ngabe sikholwa ukuthi sinamandla noma cha.
I-Facebook ne-LinkedIn bakopishe isitayela sokusakaza bukhoma se-Twitter sokubika izibuyekezo. IBlackberry ilingisa lokhu okwenzeka ocingweni lwami ngezwi, i-imeyili kanye naku-facebook. Ngenkathi ngiyithanda iMac yami futhi ngithanda ukuthi inhle kanjani i-iPhone interface, umthwalo wami wokusebenza uyaqhubeka nokwanda. Angidingi amahle… ngidinga ukukhiqiza. Izindawo zokusakaza zokusakaza zisizile ngo-2009, kepha manje azisalawuleki futhi ngidinga usizo lokuzigoqa zibe amazwibela ahambelana nami uqobo.
Kuleli sonto, ngiqale ukusebenza noChaCha. Esikhathini esedlule, angizange ngisebenzise insizakalo yabo; noma kunjalo, manje sengingeze i-242242 encwadini yami yamakheli ukuze ngikwazi ukuthumela imibuzo ngithole impendulo eyodwa efanelekile emuva. Kunokwaneliseka okuningi esivele ... ngenkathi ngishayela ngingabuza ikheli, inombolo yocingo, amahora wesitolo, njll. Akudingeki ngiseshe, ngihlunge, bese ngisebenzisa iwebhusayithi. Ngidinga impendulo… impendulo eyodwa.
Akumina ngedwa. Ukukhula kwemibuzo efanelekile, enemininingwane kukhula ngokushesha nakuGoogle. Ngikholwa ukuthi umkhuba wokusesha uzoqhubeka ngale ndlela - nezinsizakalo zokuhlunga kumphumela omuhle kakhulu zibaluleke kakhulu.
Ngenxa yalokho, isibikezelo sami sango-2010 sizoba yinqwaba yamathuluzi amangalisayo ekukhuphukeni okusiza amabhizinisi nabathengi ukuhlunga, nokwandisa nokwenza ngokwezifiso amava abo online. Lokhu okunye ukushaywa kwabathengisi - kusho ukuthi umyalezo wabo kumele ube Okuningi efanele, ifike ngesikhathi, futhi ibalulekile… ngaphandle kwalokho izokuhlungwa.
Tags: 2010ikhalendaukuvumelanisa ikhalendalemifanekisoi-google izwijoe ihholonokwandisaukwenza ngokwezifisoUkubikezelai-imeyili
Dec 12, 2009 ngo-8: 52 PM
Dec 13, 2009 ku-8: 38 AM
Ngiyavuma ngokuphelele ukuthi i-Twitter kalula ingalawuleki nokuthi kunekusasa eliqhakazile lamathuluzi afana naleli okukhulunywe ngalo lapha.